Mushure-Yekutengesa Sevhisi - HONG KONG SAUL Magetsi LIMITED.
30 Mazuva Mari Kudzoserwa Guarantee
Tinoda kuti iwe ugutsikane zvizere nechinhu chose chaunotenga kubva pawww.ebuyplc.com. Kana zvigadzirwa zvedu zvine matambudziko emhando yepamusoro uye usiri kugutsikana nezvinhu zvawatenga, unogona kudzorera chinhu mukati memazuva makumi matatu kubva pazuva rekuraira kuti udzose mari yekutenga, kubvisa iko kutumira, kubata kana zvimwe zvinowirirana.
Yedu-Yemazuva makumi matatu Mari Kudzoserwa Guarantee haishande kune zvese zvinhu. Zvinhu chete zvirimo-muzvitoro ndizvo zvinokodzera iyo 30-Mazuva eMari Kudzoserwa Guarantee.
Chigadzirwa chinofanira kudzorerwa mufekitori yayo yepakutanga ichirongedza mune yakanaka mamiriro, isina kushandiswa uye isina kuvhurwa nyika, uye nemapepa ese uye zvishongedzo kuti uve nechokwadi chizere chikwereti.
Saul's Shipping Policy paKudzoka ndeyekuti vatengi ndivo vane mutoro wekubuda uye kudzosa mitero yemitero uye kubata mari pakubhadharisa zvigadzirwa kuna Sauro, kusanganisira zvigadzirwa zvakadzoserwa pasi peiyo 30-Mazuva Mari Kudzoserwa Guarantee.
Tine chokwadi chekuti muchazogutsikana nezvigadzirwa zvatinotengesa sezvo zviri 100% zvigadzirwa zvepakutanga uye zvechokwadi. Tine chokwadi nekuti yedu yekudzorera mwero yakanyanya kuderera.
Nekudaro, isu tinopa iyo indasitiri YAKAKOSHA isina-kunetsa mari yekudzoserwa garandi yemazuva makumi matatu azere kuitira. Kana iwe usina kugutsikana zvizere, ndokumbira utumire e-mail kusales5@xrjdcs.com.